Dhiiggii, Oohintii & Sankii Laga Jabiyey - Luis Enrique Oo 27 Sannadood Kaddib Waajahaya Talyaaniga & Xusuusta Xun Ee Ka Horreysa - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDhiiggii, Oohintii & Sankii Laga Jabiyey – Luis Enrique Oo 27 Sannadood Kaddib Waajahaya Talyaaniga & Xusuusta Xun Ee Ka Horreysa
Dhiiggii, Oohintii & Sankii Laga Jabiyey – Luis Enrique Oo 27 Sannadood Kaddib Waajahaya Talyaaniga & Xusuusta Xun Ee Ka Horreysa
July 3, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Kulamada Caalamiga Ah 1
Dhiig ayaa qooyey shaadhkii caddaa ee uu u xidhnaa xulka qaranka Spain, waxay ahayd ciyaar uu garoonka ka baxay isagoo ooyaya oo ay dhakhaatiirtu la tacaalayaan sidii ay u joojin lahaayeen dhiigga ka qubanayey sankiisa.
Tababaraha xulka qaranka Spain ee Luis Enrique ayaa ka hor tegaya Talyaaniga oo uu u hayo xasuus xun oo kasoo gaadhay markii ay iska hor yimaaddeen isagoo ciyaartoy ah, isla markaana la iskugu daray guul-darro, oohin iyo dhiig.
Koobkii Adduunka 1994kii ayay Talyaaniga iyo Spain iskugu yimaaddeen, waxaana 2-1 ku ku hoggaaminaysay ciyaarta waddanka Spain xilli ay daqiiqadihii ugu dambeeyey marayso, laakiin haddana waxa soo gaadhay Spain.
Ka hor kulanka Euro 2020 ee semi-finalka ay Salaasadan wada ciyaari doonaan Spain iyo Italy, waxa aanu dib u milicsanaynaa xusuusta aan wanaagsanayn ee uu Luis Enrique kaga tegay kulankiisii ugu dambeeyey ee uu waajahay Talyaaniga.
Luis Enrique oo afka hore ee weerarka uga ciyaarayay Spain ayaa sanka ka jabay markii uu Mauro Tassotti uu gacan kaga dhuftay wajiga, waxaana markiiba uu isku daray dhiig joogsan waayey oo ay dhakhaatiirtu degdeg kusoo galeen garoonka, iyadoo sidaas lagaga saaray ciyaarta maadaama uu sanku jabay.
Semi-finalkan ayaa imanaya 27 sannadood kaddib maalintii uu shilkaasi dhacay oo ahayd July 9, 1994.
Luis Enrique wuxuu doonayay inuu dilo garsooraha kaddib dhacdadii Tassotti
Luis Enrique aad ayuu uga cadhooday dhacdadaas. Wuxuu doonayay in loo dhigo rikoodhe kaddib markii uu Tassotti sanka ka jabiyey isagoo jiray xerada ganaaxa, laakiin waxba looma dhigin. Sida uu sheegay tababare Javier Clemente, garsooruhu aad ayuu uga baqay in uu dhigo rikoodhe maadaama ay garoonka joogeen taageereyaal tiro badan oo Talyaani ah.
Tani waxay ka cadhaysiisay Enrique oo ku fikiray in uu dilo garsooraha. Senen Cortegoso oo ah dhakhtar dhinac jidh-dhiska ah, Enrique xaaladdiisu aad ayey u kacsanayd.
“Luis Enrique wuxuu doonayay inuu dilo garsooraha iyo Tassotti” Ayuu yidhi Senen Cortegoso.
Sannado kaddib, waxa kulmay Luis Enrique oo ah tababaraha AS Roma iyo Tassotti oo ahaa tababare ku-xigeenka AC Milan, waxaanay isku gacan qaadeen si kal iyo laab ah iyagoo iska cafiyey wixii dhexmaray.
Mauro tassorti wuxuu ahaa daafici hore milan inbadan wuxuu tabare ku xigeenka milan